Jumeirah Maldives: hisokatra amin'ny oktobra ny trano fandraisam-bahiny mirary trano
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Maldives » Jumeirah Maldives: hisokatra amin'ny oktobra ny trano fandraisam-bahiny mirary trano
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • fampiasam-bola • Vaovao lafo vidy • Vaovao Mafana Maldives • Vaovao • People • Resorts • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Manampy ny hotely mihamitombo hatrany ny hotely Jumeirah Group, dia hitan'ny vahiny izao ny Jumeirah Maldives, trano fandraisam-bahiny feno trano be trano nipetraka tao amin'ny rano turquoise manga ao amin'ny North Malé Atoll.
Jumeirah Group dia manokatra trano fandraisam-bahiny lafo vidy any Maldives.
Jumeirah Maldives dia handray ireo vahiny voalohany amin'ny 1 Oktobra 2021.
Jumeirah Maldives dia manolotra villa 67 amoron-dranomasina sy mihoatra ny rano.
Jumeirah Group, ilay orinasa fandraisam-bahiny manerantany ary mpikambana ao amin'ny Dubai Holding, dia nanambara androany ny fialantsasatra iraisam-pirenena vaovao, Jumeirah Maldives, izay handray ireo vahininy voalohany manomboka amin'ny 1 Oktobra 2021.
Manampy an Vondron JumeirahNy trano fandraisam-bahiny mitombo ao amin'ny hotely, azon'ny vahiny izao ny mahita an'i Jumeirah Maldives, trano fandraisam-bahiny feno trano be trano nipetraka tao anaty rano turquoise ao amin'ny North Malé Atoll, mora azon'ny sambo hafainganam-pandeha na serablane avy any amin'ny seranam-piaramanidin'i Malé. Ny toerana mahavariana dia manolotra fiainana manokana ho an'ny fitsangatsanganana am-pitiavana, fialan-tsasatra feno fahasambarana ho an'ny namana sy ny fianakaviana ary ny traikefa hifanaraka amin'ny mpandeha mavitrika kokoa.
Ny maritrano panoramic manaitra sy ny atitany mampitony ao amin'ilay toeram-pialantsasatra dia asan'ny studio famoronana Singaporeana manahirana, Miaja, izay namorona fomba fanao ankehitriny kanto mifanaraka amin'ny tontolo voajanahary, mamelombelona ny chic Mediteraneana maoderina - endrika mampiavaka azy amin'ny ambiny.
José Silva, Lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny Jumeirah Group, dia nilaza hoe: “Ny Maldiva dia fialantsasatra ankafizin'ny mpizahatany eran'izao tontolo izao ary ny Jumeirah Maldives dia toeran-kaleha izay manome ny fampanantenanay marika Stay Stay. Ny toeram-pialan-tsasatra dia manolotra fandraisam-bahiny tsy manam-paharoa miaraka amin'ny fahaiza-manao tena izy izay mihoatra ny andrasan'ny vahiny, sady manosika ny fetran'ny famolavolana, ny culinary ary ny fahaizan'ny serivisy. Fanampiny tena mahavelom-bolo ny portfolio-n'ny marika, ny trano vaovao Jumeirah Group ao Maldives dia manome antoka ny fahatsoran'ny mpitsidika tsy misy fangarony hatramin'ny fotoana niarahan'izy ireo tao amin'ilay trano fandraisam-bahiny ankehitriny. ”
Jumeirah Maldives dia manolotra villa 67 amoron-dranomasina sy mihoatra ny rano ao anaty fikirakirana iray, roa sy telo-efitrano fatoriana, izay manome toky ny fahitana any amin'ny Ranomasimbe Indianina. Manomboka amin'ny 171sqm, ireo villa ao amin'ilay toeram-pialofana dia iray amin'ireo malalaka indrindra ao amin'ny North Malé Atoll. Ny villa tsirairay dia misy pisinina tsy manam-petra sy terrasse an-tampon-tampon-trano miaraka amin'ny faritra fisakafoanana natokana ho an'ny vahiny hijerena fahitana mahatalanjona rehefa misakafo lovia mahandro sakafo matsiro na miala sasatra miaraka amin'ny sary an-tsary tonga lafatra sary eo ambanin'ny-kintana, raha ny Mirehareha amin'ny gym ihany koa ireo villa misy efitra telo.
Jumeirah Group, mpikambana ao amin'ny Dubai Holding ary orinasan-trano fandraisam-bahiny manerantany, dia miasa portfolio 6,500 24 + -key manana fananana XNUMX manerana ny Moyen Orient (ao anatin'izany ny flagship Burj Al Arab Jumeirah) Eoropa sy Azia, miaraka amina trano maro an-trano ankehitriny globe.
Ny fahasalamana sy ny fiarovana ireo vahiny sy mpiara-miasa no laharam-pahamehan'ny Jumeirah Group. Izy io dia nametraka andian-fepetra fiarovana manerana ny trano fandraisam-bahiny rehetra, raha manaraka tsara ny toromarika avy amin'ny governemanta tsirairay avy.